Barcelona oo war farxad leh ka heshay xarunta tababarka kahor kulanka Real Betis – Gool FM
(Spain) 21 Agoosto 2019. Barcelona uu hogaaminayo macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa waxay war farxad leh ka heleen xarunta tababarka ee Kooxda kahor kulanka Real Betis ee horyaalka La Liga.
Kabtanka kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa dib ugu soo laabtay tababarka guud ee Blaugrana, kaddib markii uu kasoo kabtay dhaawacii lugta midig kasoo gaaray.
Dib ugu soo laabashada Lionel Messi ee tababarka guud ayaa waxay war wanaagsan u tahay macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde, maadaama uusan heli Karin adeegyada xiddigaha Ousmane Dembélé iyo Luis Suarez, kulanka horyaalka La Liga ay kula ciyaari doonaan Real Betis garoonka Camp Nou Axada soo aadan.
Si kastaba ha noqotee, kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaan wali la hubin inuu diyaar u yahay kulanka Real Betis, madaama uusan diyaar u aheyn jir ahaan.
Laakin Messi ayaa kahor ciyaartan wuxuu qaadan doonaa 3 cashar oo tababarka kooxda Barcelona ah, waxaana suurogal ah inuu ciyaaro daqiiqado, laakiin taasi waxay ku xirnaan doontaa sida uu horumar kaga sameeyo xaaladiisa Isbuucan.
Kooxda oo dhan way cadahay in aysan qatar gelin doonin Lionel Messi hadii uusan si buuxda u soo kabsan.